पारिजातको कोठाको फुल « LiveMandu
६ बैशाख २०७६, शुक्रबार १६:००
सिसल एकप्रकारको रुख हो, जो कडा र रुखो भएको कारण सबैले चिन्दछन् । यता सिसल एकजना नारीको नाम पनि हो । सिसल सौम्य छिन्, नरम अनि लयालु भावनाहरुले लैस सिसल एउटी अदभुत नारी हुन् ।
फूलहरुको फूलाई अनि फक्राई नै जीवनको मुलभुत र एउटामात्र उदेश्य हो । सिसल के हावाहरुलाई वहने अधिकार छैन ? हावाहरुलाई पनि विश्वास गरिदेउ न सिसल, प्यारी सिसल हावाहरुलाई आफुमा स्वीकार गरेर हेर न । यस जनावरमय विश्वमा हुर्किएर तिमी पनि त एउटी जनावर भएकी छौ सिसल, केवल एकपटकका लागि जे हुन्छ हुन देउ सिसल, तिमी हावासरि वहिदेउ शायद त्यसपछि तिमी कहिल्यै रुन पर्ने छैन ।
के तिमी मलाई माया गर्दछौ?
कस्तो अर्थहिन प्रश्न हो यो ? मेरो माया पर्याप्त छ र ? पक्कै छैन नि ।
त्यसो भए तिमी मलाई बिवाह गर्नेछौं हैन त ?
हेर म त्यस पुरुषसंग बिवाह गर्नेछु जस्लाई मैले पहिल्यै कहिले देखेकी छैन । त्यस पुरुषले बिवाहको रात नै मलाई आफ्नो निर्दयीपना र मायालु भाव दुबै प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्नेछ बुझ्यौ । उस्ले मेरो मानसिकता बुझ्ने सम्म पनि प्रयास गर्यो भनें उ सदाका लागि हार्नेछ । हाहा अब त तिमीले बुझ्यौ होला नि ? म मायामा बिश्वास गर्दिन , पटक्कै गर्दिन ।
हेर मैले बिवाहको महत्वलाई आत्मसाथ नगरेकी हैन तर म बिवाहको नाममा आत्मसर्मपण गर्न चाहन्न ।
सिसल यो त तिम्रो….
हो यो केवल मेरो व्यक्तिगत निष्कर्ष हो ।
रुपरेखा पत्रिकामा प्रकाशित एक कठिन निष्कर्ष कथाको एक अंश जो पारिजातको कलमबाट निस्केको हो ।
र यस निष्कर्षमा म पारिजातको जीवनको रुपरेखा नै पाँउछु । म पेशाले लेखक, मेरो नाम सुयोग शव्द आँफैमा पारिजातको शिरिषको फूल पुस्तकको मुख्यपात्रको नामबाट साभार गरिएको हो । म मेरो नाम र सर्वनाम दुबैमा पारिजात पाँउछु, म सुयोगवीरको सुयोगका अंशका रुपमा पारिजातको कलम र मसीले आफुलाई सदैव भिजाएको पाँउछु । बिवाहप्रति पारिजातको विचार खरो थियो, उनी कसैको लागि बिवाहका नाममा आत्मसमर्पण गर्न नचाहने तर्क राख्दै मानवताको बिम्ब प्रयोग गर्दथिन । बिवाहको नाममा एकले अर्कालाई शरीर सुम्पने चलन मात्र को विरुद्ध रहेी पारिजातमा एकप्रकारको सुपेरियटी सम्प्लेक्स नै थियो शायद । पारिजातले आफ्नो प्रेम प्रसगंलाई एउटा रहस्य नै बनाएर गईन, हुन त समकालिन भुपी शेरचन, मदन रेग्मी लगायत अन्य केहिहरुको नाम पारिजातसंग नजोडिएका त हैनन तर ति नामहरु केवल साथीका रुपमा मात्रै रहे । शायद उनीहरुसं पारिजातले चाहेको गुणहरु थिएन या त प्रेमको गुरुत्ववलले पारिजातलाई त्यता तानेन ।
पारिजातले पटक पटक भनेंको वाक्य: ” मलाई मानिसहरु सर्वश्रेष्ठ प्राणीहरु हुन भन्ने कुरामा चाँही विश्वास लाग्दैन शायद त्यसैले होला म कुकुर र मान्छेलाई सरोवर देख्दछु । कारण के भनें मलाई धेरै पटक मान्छेले मान्छे नभएको झैं झुक्याएका छन् । ”
एकफेर एकजना पंक्तिकारले पारिजातलाई सोधे,
पारिजात जी किन तपाँई आफ्ना कथा र पात्रहरु बाट बाहिर निस्कनु हुन्न ? पारिजात त्यसै गरि बसेकी थिइन जसरी शिरिषको फूलमा सुकन्या बस्थिन, त्यस्तै झ्यालमा बसेर बुनिएका कुशन र केहि थान बुनाईका काँटाहरु पारिजात र पंक्तिकारका बिचमा थिए ।
पारिजातको उत्तर थियो ।
” मेरा कुनै पनि रचनाहरु मेरा जीवनगाँथा वयान गर्न लेखेकी हैन तर साकम्बरी, सिसल र सुयोगवीरले मेरा भावनाहरु बोल्दछन् । उनीहरुको जीवन र मेरो जीवन दर्शनमा म कुनै फरक नै पाँउदिन ।”
यति भनेंपछि पारिजात केहि बेर चुप लागिन अनि पंक्तिकार पनि ।
पारिजातको कोठामा एउटा केटा केहि फूलहरु साथमा लिएर छिर्दछ । उस्लाई थाहा छ कि पारिजातलाई फूलहरु मनपर्दछ । पारिजात एउटा यस्ते फूलको नाम यि लेखिकाले चुनिन जुन झरेपछि मात्र चढाउन योग्य कहलाँउछ, त्यो फूल जुन महाभारतमा अर्जुनले कुन्तीलाई भेट गर्दछन ताकि कुन्तीले ति फूलहरु महादेवलाई अर्पण गर्न सकुन ।
तर यि पारिजातको कोठामा भनें कमल र सर्वदा फूल मात्र देखियो, फूलहरु कुनै विशेष साजसज्जाका साथ थिएनन र त्यहाँ केहि थान कमल, केहि थान सर्वदा र एउटी सग्ली पारिजात थिइन् । पारिजात पछिल्ला समयमा धेरै पलहरु एक्लै बिताँउथिन, बाथ रोगले उनलाई कैदि बनाएको थियो । ठूलो भित्ता अनि झ्यालबाट देखिने लामो बाटो, पारिजातका दैनिक देखिने दृश्यहरु थिए । सिंहदरबार भित्रका ठूला रुखहरु, ति रुखका बसन्तसहयात्री चरा अनि फूलहरु पनि देखिन्थे बसन्त ताका । त्यस कोठाबाट पारिजातले आफ्ना कथा, कवितामार्फत धेरै उडानहरु भरिन, आजसम्म पनि हामी पढ्दैछौं ।
एउटा स्वास्नी मान्छेको अन्तरवार्ता : पारिजात कविता
पारिजातको डायरीमा बहिनी सुकन्याका लागि यि शब्दहरुले यिनको जीवन अवस्था चित्रण गर्दछ ।
” मेरी कान्छी बहिनी सुकन्या साहित्य र राष्ट्रप्रेमको भावनामा पागल झैं भएकी छे । उ आफु हुनुभन्दा पनि मेरो अवस्थितीलाई अझ गहिरो रुपमा मेरो प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछे । म जो यस्ती मान्छे हुँ जो माया र निर्भरतालाई जीवनभर घृणा गर्दै आएँ आज मेरी बहिनीका लागि माया र उपचारका लागि एउटी परजीवी दिदि नै भएकी छु ।”
पारिजातको डायरीमा लेखिएको अर्को मन छुने कुरा ।
“मैले आफुभित्रको भय भुलाउनका लागि लेख्न थालें, अनि लेख्दै गएँ ।”
समयसंगै पारिजातको धर्मप्रतिको धारणा परिवर्तन हुँदै गयो, उनले गीता, कुरान र बाइबलको अध्यन गरेपछि भनेंकी एउटा वाक्याशं यस्तो थियो :
“धर्म एउटा अनुभव हो जस्को कुनै पहिचान छैन ।”
बहुतै गहिरो अर्थ बोकेको यो भनाईमा पारिजातको धर्म प्रतिको बढ्दो उदारता र आत्मिक आत्मसाथ झल्केको छ ।
तपाँईलाई के लेख्न मन पर्दछ, कविता या कथा ?
पारिजात सहज उत्तर दिँदै : कविता
हुन त शिरिषको फूल भ्रमर चुम्बन मै आईली झर्दछ यस हरफमा नै समग्र कथा अटाएको छ, साराशं समेत ।
सेप्टेम्बर ७ सन् १९७३ मा यस अन्तरवार्ता लिइएको थियो । उत्तम कुवँर जी ले लिनुभएको यस अन्तरवार्ता रेकर्ड नेपालमा अँग्रेजी भाषामा प्रकाशित छ ।
लाइभमाण्डुका लागि सुयोग ढकालले अनुवाद र परिपेक्ष्यकृत गर्नुभएको ।
पारिजातको २६ सौं स्मृति दिवस विशेषांक